Fanondranana sokatra an-tsokosoko : anjatony tapitrisa ny onitra, mitaky sazy faran’ny henjana ny mpitory | NewsMada
Fanondranana sokatra an-tsokosoko : anjatony tapitrisa ny onitra, mitaky sazy faran’ny henjana ny mpitory
Amin’ny 4 avrily ho avy izao ny didim-pitsarana momba ny raharaha fanondranana sokatra, tratra teny Ivato ny volana febroary lasa teo. Roa lahy voampanga niatrika ny fitsarana omaly, ary nangatahan’ny minisiteran’ny Rano sy ala, izay mpitory onitra 250 tapitrisa Ar. Nanamafy koa ny avy amin’ny fampanoavana ny amin’ny hampiharana ny sazy faran’ny henjana ho azy roa lahy ireo, mbola miampy onitra 100 tapitrisa Ar.
Nangataka fahafahana vonjimaika izy roa lahy saingy tsy nomen’ny fitsarana. Vehivavy roa anisan’ny voasambotra amin’ity raharaha sokatra ity efa nahazo fahafahana vonjimaika kosa talohan’izao. Nisy ihany koa ny polisy iray voatonontonona nandritra ny fitsarana ka eo am-pikarohana azy sy ny famantarana azy io ny mpanao fanadihadiana.
Ny avy amin’ny Alliance Vohary Gasy (AVG) nilaza fa mijanona ho mpanara-maso ny raharaha, manomboka any amin’ny fisamborana, fanadihadiana hatrany am-pigadrana. «Misy ny fandehanana any am-ponja hanaraha-maso sao sanatria tsy any akory ireo voasazy », hoy ny fanazavana. Marihina fa ireo karazan-tsokatra Angonoka, izay tsy misy afa-tsy eto amintsika, ary biby arovana, ireo nokasaina haondrana. Efa fitsarana fanintelony amin’ny raharaha fanondranana sokatra ity teny Anosy omaly ity, hoy ny AVG, ka anisan’ny mitaky sazy henjana koa izy ireo.